Chelsea 4-0 Juventus, Blues Oo Garoonkeeda Ku Xasuuqday Juve Iskana Xaadirisay Wareega 16aad Ee Champions League-ga
HomeWararka CiyaarahaChelsea 4-0 Juventus, Blues oo Garoonkeeda ku Xasuuqday Juve iskana Xaadirisay Wareega 16aad ee Champions league-ga
November 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Falanqeynta Kulamada 0
Kooxda Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ku dubatay kooxda Juventus ee ka dhisan Dalka Taliyaaniga kulan ka tirsan Champions league-ga Guruubka H oo ku soo dhamaaday 4-0,
Blues ayaa Afarta gool ka heshay xidigaha kala ah Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi iyo Timo Werner iyagoo sidaasi iskaga xaadiriyay Wareega 16aad ee Champions league-ga.
Daqiiqaddii 25aad ayuu Chalobah hoggaanka ugu dhiibay Chelsea kubbad uu muran ku jiray oo u muuqanaysay inay gacan kaga dhacday Antonio Rudiger oo ahaa caawiyaha goolkan, taas oo aanu garsooraha kulanku waxba kasoo qaadin, isla markaana aanay VAR ka falcelin.
Reece James ayaa bilowga qaybta labaad Daqiiqadii 56aad hoggaanka ugu sii dheereeyey Chelsea kubbad uu ka helay xerada ganaaxa oo laad awood badan uu qasab ku dhaafiyey goolhaye Wojciech Szczesny oo dedaalkii badnaa ee uu hore u sameeyey uu waxba kama jiraan noqday.
Laba daqiiqadoo kaddib goolka Reece James, waxa kubbad cajiib ahayd lasoo galay xerada ganaaxa laacibka khadka dhexe ee Loftus-Cheek oo difaacyahannada Juventus si yar oo sahlan iskaga dhex qaaday, kaddibna usii dhiibay Hudson-Odoi oo kaligii meel cidlo ah taagan, kaas oo lugta bidix u adeegsaday dhamaystirka kubadda uu shabaqa ku hubsaday.
Timo Werner oo beddel kusoo galay ayaa dhamaadkii raaciyey goolka afraad oo ay kaga faa’iidaysteen difaaca Juventus ee isku dhex yaacsanaa oo xataa kala garan waayey offside-ka.
Dhinaca kale, Barcelona ayaa aflibaax gashay, waxaanay garoonkeeda Camp Nou barbarro goolal la’aan ah kula gashay Benfica.